Imtixaanku wuxuu tijaabiyaa taageerada biraawsarka | Waxaan ka socdaa mac
Instagram waxay tijaabisaa taageerada biraawsarka
Shabakada bulshada ee caanka ah ee Instagram waxay leedahay codsiyo asal ah oo loogu talagalay aaladaha moobaylka laakiin markaan ka hadlayno adeegsiga biraawsarka waxay siisaa awooda aad ku arki karto waxyaabaha laakiin aanad soo dhigin, tani way is beddeli kartaa wax yar haddii la xaqiijiyo daadinta Alessandro Paluzzi.
Waana in horumariyahan uu kuhelay lambarka Instagram suurtagalnimada jiidi oo ku rido sawirro iyo fiidiyowyo asal ahaan kombuyuutarkaaga adoo adeegsanaya biraawsarka gudaha xisaabta Instagram. Tani shaki la'aan waxay u noqon laheyd kacaan dadka isticmaala shabakadan bulshada.
Tani waa tweet-ka uu Paluzzi daabacay, ee shabakada bulshada ee Twitter waana mida hada aduunka ka socota:
#Instagram ayaa ka shaqeyneysa awooda lagu abuuri karo qoraalo shabakada desktop-ka desktop pic.twitter.com/pATuOHiTGE
- Alessandro Paluzzi (@ alex193a) Waxaa laga yaabaa 14, 2021
Ma aha wax isla markiiba imaan kara, laakiin waxay umuuqataa in shaqooyin la qabanayo si ay ugu dambayntu u hirgasho sida maalmaha u socdaan. Ku darista sheekooyinka biraawsarka mar dhow waxay noqon kartaa wax suura gal ah barta Instagram.
Sidoo kale ma jiro wax war ah oo ku saabsan codsigga hooyo ee iPad-ka ee shabakadda caanka ah ee bulshada, marka haddii warkani run yahay, waxaan wajihi karnaa isbeddel muhiim u ah adeegsadayaasha kiniinka Apple waana in ay isticmaali karaan iPad-ka ama halkii ay ka heli lahaayeen biraawsarka. naftaada si aad ugu darto sheekooyinkaaga Instagram. Caqli ahaan, isticmaaleyaasha Mac ama PC kasta ayaa sidoo kale isticmaali kara biraawsarka si ay u helaan koontadooda. noqoshada hal aalad kale oo lagu daro waxyaabaha ... Waan arki doonaa waxa ugu dambeeya ee dhaca.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Instagram waxay tijaabisaa taageerada biraawsarka
Waxaa laga dhex helay astaan ​​cusub oo "Lossless" ah oo ku dhex jirta nooca webka ee Apple Music
Isku kalsoonow: muusiggu wuxuu waligiis ku beddelayaa Apple Music